Ngaba Ungayifaka iProfayili yam yeProfayili kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngaba uyayifaka umfanekiso wam kwiprofayili kwi-twitter?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 307
Iqonga le-Twitter linayo khu seleko kwaye ikhuselwe ziingcali kwiinkqubo zolwazi olubonakalayo, kodwa umntu unikwe ubukrelekrele kunye nobuchule obusebenzisayo ukwenza izinto ezilungileyo nezimbi, ngokomdla wabo.
Abo badala inethiwekhi yoluntu iTwitter, babenombono we ukwakha inkqubo ukuba ibingakhuselekanga kwimiceli mngeni evela kwimeko ebonakalayo, eqinisekisa ukhuseleko kwiiAkhawunti zomsebenzisi.
Kodwa kwimeko ebonakalayo, abantu bavele banakho ukufikelela kwiinkqubo zekhompyuter zabanye abantu ukuba benze izinto ezimbi, ezinje ngokuHacking. Ke, kunokwenzeka ukuba uMsebenzisi ugqekeziwe iprofayile yakho. Unelungelo lokuxela ku-Twitter.
Ngaba ungawutshintsha umhla wam wokuzalwa kwi-Twitter?
Umsebenzisi kuphela kwakhe oneyakhe password ukufaka iakhawunti yakho ye-Twitter. Le phaswedi yahlukile kwaye yeyakho. Ewe kunjalo, xa uMsebenzisi esenza ipassword, ukuba sele ikho kwinethiwekhi, i-Twitter ithi ixakekile, kufuneka yenze enye.
Ngoku, ukuba uMsebenzisi akakhathali ngegama lakhe eligqithisiweyo, iqela elinomdla lisondela kuye ukuze lenze izinto zakhe ezimbi, ezinje, umzekelo, ukuguqula idatha umhla wokuzalwa, phakathi kolunye ulwazi malunga nomnini weakhawunti ye-Twitter.
También ukho Abagculeli ngorhwebo, ukuba abanye abantu baqesha ukonakalisa kunye nokunika igama elibi kwinethiwekhi yoluntu, enje nge-Twitter, umzekelo; ukuze ukhuphiswano lubambe isikhundla salo kwintengiso ebonakalayo.
INGABA NDINOKUTSHINTSHA ISHEDYULI YAM KWI-TWITTER?
Okwangoku, kunye nenkqubela phambili kwindawo ye IT Kukho ithuba lokuba abantu abangaphandle kwenkqubo yabo bangene ngokungekho mthethweni kwi-Twitter, ukuze bayisebenzise kwaye bonakalise idatha yomsebenzisi.
Ezi saboteurs ex officio, xa zingena kwiAkhawunti yoMsebenzisi, zinako tshintsha idatha ukusuka kwishedyuli yakho yeeTweets, kwizithuba zakho, izibhengezo; ngenjongo yokuba ijongeka imbi nabalandeli bayo kwaye iphulukana nodumo kwinethiwekhi.
Xa a saboteur Uyabona ukuba uMsebenzisi unesimo esonakalisiweyo kwi-Twitter, ufuna ukumngqengqisa phantsi ukuze azibekele udumo lwakhe kwaye amhambise emnatheni. Umsebenzisi kufuneka anike ingxelo ku-Twitter kuphela.
Ngaba ungayiguqula imiyalezo endiyithumela kuTwitter?
Los Imigewu banokwenza nantoni na abayifunayo ngobuchule babo obubi bokwenzakalisa umntu wesithathu. Xa uMsebenzisi ethumela umyalezo, ufika kwangoko kwindawo esiya kuyo, ngaphandle kokuba uvaliwe yindlela ebonakalayo.
Kanye umyalezo uvaliweAbaphetheyo ngorhwebo banokuyiguqula ngentando ngaphambi kokuba ifike kwindawo yayo yokugqibela, kodwa kuya kufuneka ubenguHacker ophumeleleyo ngobuchule kunye nezakhono ezibonakalayo eziyimfuneko ukwenza isenzo esinjalo.
Kutheni le nto uHacker efuna lungisa umyalezo kwenye iakhawunti? Mhlawumbi kungenxa yokuba ufuna ukuqinisekisa ukuba ulunge kangakanani ekusebenziseni iinkqubo zekhompyuter zabanye abantu. Umsebenzisi kuphela unokhetho lokuxela kwi-Twitter.
1 Ngaba ungawutshintsha umhla wam wokuzalwa kwi-Twitter?
2 INGABA NDINOKUTSHINTSHA ISHEDYULI YAM KWI-TWITTER?
3 Ngaba ungayiguqula imiyalezo endiyithumela kuTwitter?
Izihloko ze-Twitter ezenzelwe wena
Izizathu zokuba iFacebook ingavala iakhawunti